नेकपा विवादले संसद् व्यवस्थापन कठिन, तानातानमा सांसद – Online National Network
काठमाडौँ, १८ फागुन – नेकपा विवादले संसद्का कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ। संसद् विघटनअघि र पुनःस्थापनापछिको संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विचलनले अप्ठेरो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि यतिबेला सांसदहरु तानातानमा परेका छन्।
कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएकाले दुईजनालाई प्रमुख सचेतक कसरी बनाउने भन्ने अन्योल छ। तर राजनीतिक विषय पनि भएकाले यसबारे सभामुखले राजनीतिक छलफल सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ। दुवै प्रमुख सचेतकलाई दलको हैसियतले बोलाउने या सदस्यका रूपमा आमन्त्रित गर्ने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ।
नियम १३ को उपनियम ३ मा ‘सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ। संसद् सचिवालयमा अहिले आधिकारिक पार्टी नेकपा मात्रै रहेको अभिलेख छ। नेकपाले जसलाई प्रमुख सचेतक बनाएको छ, उनैलाई नै बैठकको निम्तो दिनेछ। तर यतिबेला भने राजनीतिक विषय भएकाले दुवैलाई निम्तो दिने तयारीमा संसद् सचिवालय रहेको छ। संसद्भित्र दुवै दल फुटेको कानुनी आधार नदेखिएकाले नेकपाका दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहलाई सत्तापक्षकै सिटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदीय दलबाट र संसदबाट ओलीलाई नहटाएसम्म संसद् सचिवालयको रेकर्डमा संसदीय दलको नेताका रूपमा ओली नै छन्। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले संसद्ले कानुनी कुरा मात्र हेर्नुपर्ने भएकाले अन्य कुरामा जान नसक्ने बताए। यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषय दलहरूले नै मिलाउने हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विषय मात्र हामीले मिलाउने हो।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाबीचको द्वन्द्वले संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतम दोहोरो चपेटोमा परिसकेका छन्। संवैधानिक नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ हुने/नहुने विषयमा दुवै पक्षबीच एकअर्काले प्रकाशित गरेका विरोधाभासपूर्ण विज्ञप्तिको साक्षी महासविच डा. गौतमले बस्नुपरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि अध्यक्षदेखि अरू नेताहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् । फैसला पुनःस्थापनाको पक्षमा आए ओलीले राजीनामा दिइहाल्छन् भन्ने अनुमान फेल खाएपछि उनीहरूलाई झन् अप्ठ्यारो परेको हो । सांसदहरूलाई फोन गर्ने र आफ्नो पक्षमा आऊ भन्नेसम्म राजनीतिक भए पनि पैसा या मन्त्रीकै लोभ दिएर बार्गेनिङ गर्ने गैरराजनीतिक बातावरण भइरहेको छ  ।